Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ဒုက္ခရောက်နေတာကို ဒုက္ခရောက်တာရယ် လို.ဖွင့်ဟမပြောရ
ငမိုက်တွေ၊ငရူးတွေ၊ခွေတွေ၊သူယုတ်မာစစ်ဘီးလူအုပ်စုတွေက ကိုယ်.ပြည်သူထုတို.၏ခံစားချက်တွေကိုမကြားနာမထောင်တဲ့အပြင် အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း ဖွင်.ပြပြောဆိုတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအပြစ်တင်ဂွင်ရိုက်လုပ်သျလိုက်ပြန်ပြီ၊ ခွေတွေပိုင်တဲ့ မြန်မာ.အမှုန်သတင်းစာမှာဘာပြောသလဲဆိုတော့...နိုင်ငံ၏ဂုဏ်ကျက်သရေတွေကိုပျက်စီးစေတဲ့ဖန်းတီးပြုလုပ်ထားသောဗွီဒီအို(ဆိုင်ကလုန်နာဂစ်)ကို ပြည်ပသတင်းဌာနတို.အားလူထုတွေကရောင်စားပေနေတယ်တဲ့..၊ကိုဇာဂနာကိုဖမ်းဆီးထားပြီးနောက်ပိုင်း အခုလိုတောင်ရောက်၊မြောက်ရောက်လျှောက်ပြောနေတာ၊ ဒုက္ခရောက်သူများအတွက်နိုင်ငံတကာမှလှူဒါန်ထားသောပစ္စည်းတွေပကိုခိုးတုတ်၊ ဒုက္ခသည်းအစစ်အမှန်တွေကို နှင်းထုတ်၊အဲဒါ သူယုတ်မာအမျိုးတွေဘုရားသားတွေကိုသတ်ဖြတ်၊သာသနာကိုဖျက်ပျောက်၊
YANGON (Reuters) - Myanmar's junta attacked "unscrupulous" citizens and foreign media on Friday for presentingafalse picture of the devastation left by Cyclone Nargis as experts began mapping the extent of the disaster.
The New Light of Myanmar, the mouthpiece of the ruling generals, said people had been selling video footage "of invented stories" to foreign news organizations which tarnished the country's image.
"The people who are in touch with the situation feel that the despicable and inhumane acts by local and foreign anti-government groups and self-centered persons and their exploiting of the storm victims are absolutely obnoxious," the newspaper said.
"Those foreign news agencies are issuing groundless news stories with the intention of tarnishing the image of Myanmar and misleading the international community into believing that cyclone victims do not receive any assistance," the New Light of Myanmar said.
The newspaper report accused media organizations and local people of "luring naive storm victims" with leading questions on their living conditionsaweek after the junta began evicting thousands of people from state-run camps out of apparent fear that the tented villages could become permanent.